Published June 8, 2020 at 10:45 PM CDT
North west Iowa keessatti yaali qorannoo Carroll fi Denison keessa kan jiru dabalate Test Iowa akka banamu har’a ibsaniiru. Ummanni akka himameti online naan testiowa.com irra kan jiru guutudhaf qaxaroo qabachuu qabu fi qorannoo gochuudhaf qaxaroo qabachuu qabu.
U.S Department of Transportation federal Transit Administration mallaqaa magaala Sioux City dhaaf million $4.8 badhaasa kuunera.
Kunis bakka coronavirus warra motumaa kan miidhamanii, bilaasha kahintaane fi hojattoota dhuunfa kan kennamu qarqaarsa qaama mootumma irraayi.
Kennaan kunnis goree buufata baasaa qarqaaruf, meeshaa ofi eeganno hojjaatootaf, meesha qulqulina fi mataa waan uf eeganin dabalate.
WinnaVegas manni qumaarii guyyaa Jimaata sa’ati 10:00 am irraa jalqabe harka 50% hinbanama.
Irra deebi’ame kan banamu keessa warri jalqaba irra jiruu maashina ittiin tophatan dha fi wanneen biraa ka’ittin fayyadaman ammaaf cufaa kan taa’u ta’u. sadarkan sa’aati jaraa akkaata keesuma isaani nageenya fi fayyaan itti tolee dhufeniti too’ataan casino murteesa banuuf.
Manni kitaaba (library) magaala Sioux City banuudhaf tartiibaan itti deemama jira. Tartiibni jalqaba June 15 irraa jalqabe damee Perry Creek mana kitaabaati curbside pick-up dhaaf turban tokko ni hafa.
Tajaajilamtooni mana kitaaba fuula online irratti tarreeffama meeshota kahuu fi hojjaatoota gahaa gaafa san eega qabatani booda dame perry creek ti yerroo dhumaa qabachuudhaf mani kitaabaati haasawa godhu. Beelamnis Wiyxata hanga Jimaatati argama.
Meeshadhan jaraa martuu bakka addaa kaahame laalame osoo namni itti aanu hin fudhati, kunis fayyaa fi nageenya nama eeguf kan godhameedha. Kitaabi kan kaahame dame sadihiiti hanga hojjattooni sodaa dhukuba kanaa gad xiqqeesaniiti.
Local News LocalIowaSioux CityWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaSioux City Public LibrarynewsCOVID-19OromoTestIowa
Governor Iowa Kim Reynolds hiriira ilaalate gargaarsa dabalata osoo hin ajaajne dura bulchoota naannawa yaada isaani akka gaafatu himte. Turban darbee…